Ny Fomba Fihevitr’i Aristote An’izao Rehetra Izao
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luvale Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Oromo Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
TENA nampandroso ny siansa sy ny filozofia i Aristote, efa 2300 taona mahery izay. Nahaliana ny olona nandritra ny taona maro ny asa sorany, ary nofakafakaina sady nadika tamin’ny fiteny maro. Hoy i James MacLachlan, mpampianatra tantara: “Nahazo vahana tany Eoropa, nandritra ny 2000 taona latsaka kely, ny fomba fihevitr’i Aristote momba ny zavaboary.” Nisy vokany teo amin’ny fampianaran’ny fivavahana katolika, protestanta, ary silamo mihitsy aza ny zavatra sasany nampianariny.
Maro ny zavatra nahaliana azy
Nanoratra momba ny zavakanto i Aristote, ary koa momba ny kintana sy planeta, zavamananaina, fiteny, fitsipi-pitondran-tena, lalàna, lojika, herin’ny andriamby, filozofia, fihetsehana, fahafinaretana, tononkalo, politika, psikolojia, fahaiza-mandaha-teny, ary ny fanahy, izay nolazainy fa mety maty. Ny asa sorany momba ny zavamananaina sy ny lojika anefa no tena mampahalaza azy.
Niantehitra tamin’ny zavatra hitany sy ny fanatsoahan-keviny ary ny lojika ny manam-pahaizana grika fahiny, mba hanazavana momba an’izao rehetra izao. Nino izy ireo fa raha nofakafakainy tsara izay zavatra noheveriny fa marina, dia ho marina koa ny fanatsoahan-keviny.
Maro tamin’ny fanatsoahan-kevitr’izy ireo tokoa no nitombina, anisan’izany ny hoe milamina tsara izao rehetra izao. Nisy olana lehibe anefa. Voafetra ihany ny zavatra hitan’ny maso, ka nanjary diso hevitra izy ireo sy ny manam-pahaizana maro, anisan’izany i Aristote. Nihevitra, ohatra, izy ireo fa mihodidina ny tany ny planeta sy ny kintana. Noheverina ho fahamarinana tsy azo iadian-kevitra izany. Hoy ilay boky hoe Tsy Nety Nivoatra ny Tandrefana (anglisy): “Ny fahalalan’ny olona tamin’izany sy ny fandinihana an’ireo zavatra hita maso, dia toa nanamarina ny hevitry ny Grika hoe ny tany no ivon’izao rehetra izao.”
Tsy ho nisy vokany firy teo amin’ny tantara io hevi-diso io, raha ny mpahay siansa ihany no nino azy io. Tsy izay anefa no zava-nisy.
Neken’ny Fivavahana Katolika ny hevitr’i Aristote
Niaiky ireo tany eoropeanina milaza azy ho Kristianina, teo anelanelan’ny taona 500 ka hatramin’ny 1500 tany ho any, fa marina ny sasany tamin’ny fampianaran’i Aristote. Nampidirin’ny teolojianina katolika, indrindra fa i Thomas d’Aquin (1224-1274 tany ho any), ho anisan’ny fampianaran’ny fivavahana ny asa soratr’i Aristote. Lasa anisan’ny foto-pinoana katolika àry ilay hoe ny Tany no ivon’izao rehetra izao ary tsy mihetsika izy io. Nanaiky an’ilay fampianarana koa ny mpitondra fivavahana protestanta, toa an’i Calvin sy Luther, izay nilaza fa mifanaraka amin’ny Baiboly izy io.—Jereo ilay efajoro hoe “ Nadikany Vilana ny Baiboly.”
Nekena ho marina ny sasany tamin’ny fampianaran’i Aristote
Hoy ilay mpanoratra atao hoe Charles Freeman: “Nifangaro ny [fampianaran’i Aristote] sy ny fampianarana katolika indraindray.” Nisy àry nilaza fa notaomin’i d’Aquin hanaraka ny Fivavahana Katolika i Aristote. “I d’Aquin anefa no lasa mpanara-dia an’i Aristote” raha ny marina, hoy i Freeman. Tsy izy ihany fa ny eglizy koa. Nolazaina fa nivadi-pinoana àry izay sahy nilaza fa mihodidina amin’ny masoandro ny Tany. Nanao an’izany i Galilée, Italianina mpahay matematika sady manam-pahaizana momba ny kintana sy planeta. Nentina teo anatrehan’ny Fitsarana Katolika izy, ka noterena hiaiky hoe diso ny heviny. * Efa nilaza anefa i Aristote fa mihamandroso ny siansa, ka mety hisy fanazavana mila ahitsy. Raha mba nitovy hevitra taminy mantsy ny eglizy!
^ feh. 11 Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo ny lahatsoratra hoe “Galilée” ao amin’ny Mifohaza! Jona 2015.
Tena tia nianatra i Aristote. “Niaiky izy fa sarobidy sy tena kanto izao rehetra izao, ka nanaja lalina azy io izy.”—Aristote: Teny Fampidirana Fohy (anglisy).
Nino izy fa misy “Mpanetsika” azy ny zavaboary matoa tsy mitsaha-mihetsika. Any ivelan’izao rehetra izao, hono, no misy azy io, ary velona mandrakizay izy sady tsara toetra.
Voalaza fa i Aristote no namorona ny siansa momba ny zavamananaina sy ny lojika.
Nampianatra ankizilahy makedonianina iray i Aristote. Nantsoina hoe Aleksandra Lehibe izy io tatỳ aoriana, ary nanorina fanjakana midadasika.
Olona maro fahiny no nino fa ny Tany no ivon’izao rehetra izao
Nadikany Vilana ny Baiboly
Nisy teolojianina fahiny nino toa an’i Aristote fa ny Tany no ivon’izao rehetra izao. Nadikan’izy ireo vilana mantsy ny andininy sasany ao amin’ny Baiboly, toy ny Salamo 104:5. Voalaza ao fa “[naorin’Andriamanitra] ny tany, ary nataony mafy orina ny fototra iorenany, ka tsy ho voahozongozona mandrakizay.” Tsy ny toerana misy ny Tany eo amin’izao rehetra izao anefa no resahin’ilay mpanoratra eo. Nampiasa sarin-teny kosa izy mba hilazana fa haharitra mandrakizay izy io, araka ny fikasan’Andriamanitra.—Mpitoriteny 1:4.
Na izany aza, dia mifanaraka amin’ny siansa ny Baiboly. Efa 3500 taona teo ho eo, ohatra, ny Joba 26:7 no nilaza fa “[ahanton’Andriamanitra] eo amin’ny tsy misy ny tany.” Milaza koa ny Joba 38:33 fa misy lalàna fizika mifehy azy ny zavatra eny amin’ny lanitra.
Hizara Hizara Aristote